"Tsy fanahy manompo va izy rehetra (ireo anjely), nirahina hanao fanompoana ho an’izay handova famonjena? Hebreo 1:14 Ary nahita aho sady nandre feon’anjely maro manodidina ny sezafiandrianana sy ny zava-manana aina ary ny loholona, ary ny isany dia alinalina sy arivoarivo." Apokalypsy 5:11
Ny anjely dia zava-manana aina ara-panahy noforonin’Andriamanitra mba hanompo Azy, mba ho vavolombelon’ny fahamasinana, fahalehibeazana ary fahendren’Andriamanitra sy Kristy (Isaia 6:2, 3; Apokalypsy 5:11,12). Noarìna izy ireny, ary tsy andriamanitra na mahaleo tena. Mankatò an’Andriamanitra izy ireny, avy aminy mivantana no ananany hery sy fahefana, ary tsy mba mihatra aminy ireo fetran’ny vatan’olombelona (Hebreo 1:7).
Amin’ny maha mpitondra hafatra azy ireny (izany no hevitry ny teny hoe “anjely”), dia Andriamanitra no mampiasa azy, mba hanatanteraka ny sitrapony. Miasa eo anivon’ny olombelona izy ireny, mitondra hafatra manokana ary mety haka endrik’olombelona (Genesisy 18:2,16; Ezekiela 9:2). Nanana anjara lehibe izy ireny tamin’ireo tranga nanodidina ny nahaterahan’i Jesosy (Lioka 1:11, 26-38), ny nahafatesany (Lioka 22:43), ny nitsanganany tamin’ny maty (Matio 28:2-5) ary ny niakarany tany an-danitra (Asan’ny Apostoly 1:10). Mbola hanana anjara ihany koa izy ireny amin’ny fiverenan’i Jesosy hametraka eto an-tany ny fanjakany be voninahitra (Matio 16:27).
Ny anjely dia miaro manokana ny ankizy (Matio 18:10), ny mpino, ary manampy azy ireo (Daniela 9:20-27). Mitondra ny mpino any an-danitra izy ireny (Lioka 16:22) ; manatanteraka ireo didim-pitsaran’Andriamanitra manameloka ny ratsy fanahy (Genesisy 19:12-13; Apokalypsy 16:1-17). Nikomy tamin’Andriamanitra ny anjely sasany (2 Petera 2:4; Joda 6). Milaza sokajin’anjely roa ny Baiboly, dia ireo izay manompo an’Andriamanitra sy mankatò Azy, na tsia. Tsy manaiky hiankohofana ireo anjely masina, ary manantitrantitra fa Andriamanitra no hany mendrika ivavahana (Apokalypsy 22:8-9).